०८:५४, ७ डिसेम्बर २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन
३२६ बाइटहरू हटाइयाे , ३ वर्ष अघि
०८:३६, ७ डिसेम्बर २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
०८:५४, ७ डिसेम्बर २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सात वर्षको अल्पायुमा नैं गदाधरका बुबाको मृत्यु भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पूरा परिवारको भरण-पोषण गर्न कठिन थियो। आर्थिक कठिनाइ आयो। बालक गदाधरको साहस कम भने थिएन । उनको दाजु [[कलकत्ता]]मा एक पाठशालाका सन्चालक थिए। तिनले गदाधरलाई आफु सँँग कलकता लगे । रामकृष्णको अन्तर्मन अत्यन्त निश्चल, सहज र विनयशील थियो। संकीर्णताहरूदेखि धेरै टाढा थिए। उनी सदा आफ्नो कार्यमा लागी रहन्थे।
सतत प्रयास पछि पनि रामकृष्णको मन अध्ययन/अध्यापनमाअध्ययनमा लाग्न सकेन । कलकत्ताको[[कलकत्ता]]को नजीक दक्षिणेश्वर स्थित काली माताको मन्दिरमा उहाँकाउनको अग्रजदाजुले रामकुमारले पुरोहितकोपुजारीको दायित्व सुम्पनु भयो।सुम्पिए। रामकृष्ण यसमा पनि रम्न सक्नुसकेनन्। भएन।केही कालान्तरमासमय ठूलापछि भाइदाजुको पनि बित्नुमृत्यु भयो।भयो । भित्रदेखि मन नपरे पनि रामकृष्णऊनी मंदिरकोमन्दिरमा पूजाअवस्थित एवंकाली माताको पुजा अर्चना गर्न थाल्नुथाले भयो। रामकृष्ण माता कालीका आराधक हुनुभए भयो।। बीस वर्षको अनवरत साधना पश्गचातपश्चात माताको कृपाले उहाँलाईउनलाई परम दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो। उहाँकोउनको प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्देविवेकानन्दले एक पल्ट उहाँलाईउनलाई सोघ्नु भयो की महाशय के तपाईंलेतपाईले ईश्वरलाई देख्नु भाकोभएको छ ? महानमहान् साधक रामकृष्णले उत्तर दिनु भयो कीदिए हो मैले देखेको छु । जस प्रकार।जसरी तिमीलाई देखीदेखि रहेको छु ठीक त्यसैत्यसरी प्रकारनै । तर त्यो भन्दा झन वढीधेरै स्पष्ट रुपमारूपमा । उहाँउनी स्वयंको अनुभूति देखिअनुभूतिले ईश्वरको अस्तित्व सम्मको विश्वास दिलाउनु हुन्थ्योदिलाउथे । उहाँउनी आध्यात्मिक ,सत्यवादी, ज्ञानकाज्ञानको प्रखर तेजदेखि भक्ति ज्ञानका प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो।थिए। काली माताको भक्तिलाइभक्तिलाई अाह्वान गरेर उहाँउनी भक्तहरूलाई मानवताको पाठ पढाउनुहुन्थ्योपढाउथे ।
रामकृष्णका शिष्य नाग महाशयलेनागले गंगातटमा जब दुइदुई मानिसहरूलाई रामकृष्णलाई गाली गर्दै गरेको सुन्नु भयोसुने तब क्रोधित हुनु भयोभए । परन्तुतर तिनकोउनीहरूको मनमा श्रद्धा जगाएर रामकृष्णको भक्त बनाइदिनु भयोबनाइदिए । सच्चा भक्तिकाभक्तिको कारण दुवैलाई रामकृष्णका चरणहरूमाचरणहरू छुवाएर माफ माग्न लगाउनुलगाउए भयो।। रामकृष्ण परमहंशले तिनलाई क्षमा गरिदिनु भयो।गरिदिए ।▼
▲रामकृष्णका शिष्य नाग महाशयले गंगातटमा जब दुइ मानिसहरूलाई रामकृष्णलाई गाली गर्दै गरेको सुन्नु भयो तब क्रोधित हुनु भयो । परन्तु तिनको मनमा श्रद्धा जगाएर रामकृष्णको भक्त बनाइदिनु भयो । सच्चा भक्तिका कारण दुवैलाई रामकृष्णका चरणहरूमा छुवाएर माफ माग्न लगाउनु भयो। रामकृष्ण परमहंशले तिनलाई क्षमा गरिदिनु भयो।
एक दिन परमहंसले अमला माग्नु भयो। त्यतिवेला अमलाको मौसम थिएन। नाग महाशयले खोज्दै जाँदा वनमा एक रुखको तल्लो भागमा ताजा अमला राखीएको पाउनु भयाे र त्यो अमला रामकृष्णलाई दिनुभयो। रामकृष्ण ले भन्नु भयो की मलाई थाह थियो की तिमि नैं लिएर आउँनेछौ। तिम्रो विश्वास सच्चा छ।
रामकृष्ण परमहंस जीवनको अन्तिम दिनहरूमा समाधिको स्थितिमा रहनु हुन्थ्यो । असक्त शरिर शिथिल हुन लाग्यो । शिष्यहरु स्वास्थ्यमा ध्यान दिन प्रार्थना गर्दा अज्ञानता ठानेर हाँसी दिनुहुन्थ्यो। उहाँका शिष्य ठाकुर नामले पुकारिन्थे। रामकृष्णका परमप्रिय शिष्य विवेकानन्द केही समय हिमालयका कुनै एकान्त स्थानमा तपस्या गर्न चाहनु हुन्थ्यो । यही आज्ञा लिन जब उहाँ गुरूका नजीक जानु भयो तब रामकृष्णले भन्नुभयो की वत्स हाम्रो आश्रम क्षेत्रका मानिस भोकदेखि तडपी रहेका छन्। चारैतर्फ अज्ञानको अंध्यारो छाएको छ। यहाँ मानिस रुँदै छन तर तिमी भने हिमालयको कुनै गुफामा समाधिको आनन्दमा निमग्न रहँने कुरा के तिम्रो आत्माले स्वीकार्नेछ ? गुरुको यस्तो आदेशवाट स्वामी विवेकानन्द दरिद्र जनको सेवामा लाग्नु भयो । रामकृष्ण परमहंश महान योगी, उच्चकोटिका साधक अनि विचारक हुनुहुन्थ्यो । सेवालाई ईश्वरीय पथ मानेर अनेकतामा एकताको दर्शन गर्नु हुन्थ्यो। सेवादेखि समाजको सुरक्षा समेत चाहनु हुन्थ्यो । जब डाक्टरहरूले घाँटीको कैंसर भएको बताएर समाधि लिने र कुराकानी गर्नका लागि वन्देज गरे तब पनि उहाँ मुस्कुराउनु भयो। उपचार गर्नमा रोक लगाएतापनि स्वामी विवेकानन्दले उपचार भनै गराइ नै रहनु भयो । स्वामी विवेकानन्दले काली माँ संग रोग मुक्तिका लागि विन्ती गर्न अनुरोध गर्दा परमहंसले यस शरिरमा माताको अधिकार छ त म के भनुँ, माताले मेरो लागि राम्रो नैं गर्नु हुनेछ भनी मानवताको लागी मंत्र दिनु भयो । उहाँको भौतिक शरिर १५ अगस्ट, १८८६ मा ५० वर्षको आयुमा पंचतत्वमा विलीन भयाे ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/691975" बाट अनुप्रेषित